Tọgharia modulu Bluetooth na Mac | Esi m mac
Tọgharia modulu Bluetooth na OS X
Miguel Angel Juncos | | Apple, Mac OS X, Nkuzi
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ngwa ngwa mmadụ dị ka keyboard, òké ma ọ bụ trackpad na-ejikarị usoro Bluetooth iji jikọọ na Mac. ọbụna ụdị ndị ọzọ dị ka ndị ọkà okwu na ndị na-ebi akwụkwọ ha na-ejikwa ya na ọ bụ ezie na ọ bụ iwu n'ozuzu ọ na-arụkarị nke ọma, oge ụfọdụ enwere oge mgbe ọ na-enye nsogbu ma nwee ike iwe iwe n'ihi ọnụọgụ nke nkwụsị na njikọta ọzọ.
Nke a nwere ike ibute na ọ bụrụ na anyị ji akụrụngwa enwere ike ibugharị, batrị ahụ na-ata ahụhụ ebe ọ bụ na akụrụngwa ahụ ga na-agba mbọ mgbe niile ijikọ na ngwaọrụ ndị ahụ. Ikekwe ihe ọ ga-abụ iwepụ ngwaọrụ nke na-akpata nsogbu karịsịa na re-pairing Ọ nwere ike ịkwụsị nsogbu a, mana ọ bụrụ na ọ na-eme ugboro ugboro n'ọtụtụ oge yana akụkụ dị iche iche, mgbe ahụ anyị ga-atụle ịtọgharị modul Bluetooth.
Accessnweta Zoro ezo Debugging Bluetooth na Mac OS X Iji tọgharịa modul ngwaike dị mfe, naanị ihe ị ga-eburu n'uche bụ na ọ bụrụ na anyị eme ya, anyị ga-atụfu ikike iji ngwaọrụ ndị ejikọtara nwa oge ruo mgbe anyị ejikọtaghị ha ọzọ, yabụ ọ dị mma na anyị nwere oke ejikọrọ na njikọ USB.
Inwe ike ime ha na desktọọpụ anyị ga - ejide ma Gbanwee igodo ALT na mgbe ahụ anyị ga-pịa na akara ngosi Bluetooth iji kpughee menu nbugharị zoro ezo ebe anyị ga-ahọrọ «Tọgharia modulu Bluetooth».
Naanị ihe fọdụrụ bụ ịmalitegharịa kọmpụta ahụ ma jikọtakwa ngwaọrụ niile dịka ọ dị na mbụ, ọ bụrụ na mgbaàmà ahụ dị mma na enweghị nnyonye anya, ekwesịrị idozi nsogbu nke njikọ. Ee ọbụna mgbe ahụ anyị nwere obi abụọ maka akara ngosi ahụ, anyị nwere ike idobe igodo ALT mgbe anyị pịa akara ngosi ahụ na mgbe anyị debere onwe anyị na ngwaọrụ ọ bụla, a ga-egosipụta ogo nke mgbaama ahụ na akụkụ ahụ akọwapụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Nkuzi » Tọgharia modulu Bluetooth na OS X
Francisco Valenzuela-Rojas dijo
Nnọọ !!… Mgbe ị na-eme otu ihe ahụ OS X El Capitan 10.11.2, Debug menu apụtaghị. Kedu ihe ị ga-eme n'okwu ahụ? ...
Zaghachi Francisco Valenzuela Rojas
Nnọọ. Ọ ga-amasị m ịmata ma m nwere ike itinye SSD na RAM karịa na iMac 16,2 m.
Sonos na-akwado Apple Music ugbu a
Na-eme ka ọnọdụ "Edoghara" na OS X